အေမီ ဝိုင်းဟောက်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(1983-09-14)၁၄ စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၈၃
၂၃ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၁(2011-07-23) (အသက် ၂၇)
ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းသော အသံကို ပိုင်ဆိုင်သူ ဗြိတိန်တေးရေးဆရာ၊ ဂရမ်မီဆုရ အဆိုတော် အေမီဝိုင်းဟောက်စ်သည် လန်ဒန်မြို့ တွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကိုယ်တိုင်သီချင်းရေးစပ်ကာ ဂျပ်ဇ်ကလပ်များတွင် ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် တေးထုတ်လုပ်ရေးများစွာနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ပွဲဦးထွက်ဖြန့်ချိသော Frank အယ်လ်ဘမ် မှာ ပရိသတ်၏ အသိ အမှတ် ပြုခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဗြိတိန်တွင် ပလက်တီနမ် ဓာတ်ပြားဆု သုံးကြိမ်ရရှိ ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယမြောက် အယ်လ် ဘမ်ဖြစ်သော Back to Black အယ်လ်ဘမ်ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဂရမ်မီငါးဆုရရှိခဲ့သည်။ ယင်း အယ်လ်ဘမ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းချပ်ရေ ၁၀ သန်းနီးပါး ရောင်းချခဲ့ရပြီး ဗြိတိန်အရောင်းရဆုံးစာရင်းတွင် နံပါတ် ၁ နှင့် အမေရိကန်တွင် နံပါတ် ၂ ချိတ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန် တွင် ပလက်တီနမ် ခြောက်ကြိမ်နှင့်အမေရိကန်တွင် နှစ်ကြိမ်ရရှိသည်အထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အေမီသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဘလိတ်ဖီလ်ဒါစီဗစ်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ ပြီး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမှုကြောင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် တွင် ကွာရှင်းခဲ့သည်။ အေမီသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နွေဦး ရာသီတွင် ဥရောပဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များရှိသော် လည်း ဇွန်လ ၁၈ ရက်တွင် ဆားဗီးယား၌ ဖျော်ဖြေပွဲပြု လုပ်ရာ အရက်အလွန်အကျွံ သောက်စားထားသဖြင့် အဆင်မပြေမှုဖြစ်ရာမှ ယင်းဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ ကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ပေါ့ပ်ဂီတလောက၏ စံပြ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သူ အေမီသည်လန်ဒန်မြောက်ပိုင်း ကမ်ဒင်မြို့ရှိ နေအိမ်တွင် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်၊ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်တွင် လန်ဒန်မြို့၌ အရက်အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခဲ့သောကြောင့် ကွယ်လွန်သည်။ အေမီ ဝိုင်းဟောက်စ်ကို (အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်တွင် သေဆုံး ခဲ့ သော ထင်ရှားသည့်ရော့ခ် အဆိုတော်များအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသည့်) 27 Clubတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အေမီ ဝိုင်းဟောက်စ် (Amy Winehouse) (၁၄ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၃ - ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၁) သည် R&B၊ soul၊ jazz စသည့် ဂီတဟန်များဖြင့် သီဆိုလေ့ရှိသည့် ဗြိတိသျှ တေးရေး၊ တေးဆို တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အားမာန်အပြည့်နှင့် အသံနိမ့်ကို ပိုင်ဆိုင်သူအဖြစ် လူသိများသည်။
သူမ၏ ဗွေဆော်ဦး တေးအယ်လ်ဘမ် Frank ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဖြန့်ချိသည့် ဒုတိယ အယ်လ်ဘမ် Back to Black ဖြင့် သူမသည် ဂရမ်မီဆုကြီး ၅ ခုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ရာ ဆု ၅ ခုရသည့် ပထမဦးဆုံးသော ဗြိတိသျှ အမျိုးသမီး တေးသံရှင်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။
ဂီတအပိုင်းတွင် ပါရမီရှိကာ အောင်မြင်သော်လည်း အေမီ ဝိုင်းဟောက်စ်သည် မိမိ၏ လက်တွေ့ဘဝ အပိုင်းတွင်မူ အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ သူမသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် လန်ဒန်မြို့ရှိ နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၂၇ နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ 
↑ Repertoire (မော်ကွန်းတိုက်).
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အေမီ ဝိုင်းဟောက်စ်.
↑ Amy Winehouse: Singer, Guitarist and Lost Soul.
↑ Amy Winehouse Guitars.
↑ အေမီ ဝိုင်းဟောက်စ်ကွယ်လွန် (ဘီဘီစီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အေမီ_ဝိုင်းဟောက်စ်&oldid=659609" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။